पिटुसिटुमा डा.दम्पत्ती न्यौपानेको खाद्यान्न सहयोग, प्रहरी निरीक्षक देवराजद्धारा एक बालकलाई अभिभाकत्व गर्ने घोषण (भिडियो) – Saurahaonline.com
पिटुसिटुमा डा.दम्पत्ती न्यौपानेको खाद्यान्न सहयोग, प्रहरी निरीक्षक देवराजद्धारा एक बालकलाई अभिभाकत्व गर्ने घोषण (भिडियो)
सौराहा अनलाइन | २०७७, १२ बैशाख शुक्रबार
चितवन : बालबालिकाहरुका लागि प्रहरी नागरिक अभियान नेपाल (पिटुसिटु) आश्रित सडक बालबालिकाहरुलाई खाद्यान्न तथा अन्य अत्याआवशयक सामाग्री सहयोग प्रदान गरिएको छ।
विपन्न समुदायको हरेक विपद्मा सहयोग गर्दै आएका चिकित्सक दम्पत्ती डा. अजय न्यौपाने, डा.सरु थापा न्यौपानेले आफ्नो विवाह बर्ष महिनाको अवसर पारि सो सहयोग हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
पिटुसिटुमा आश्रित २८ जनालाई एक महिनालाई पुग्ने गरि चामल, दाल, तेल, नुनु, भुजा, विस्कुट, अण्डासहित डेगुबाट जोगिन झुल र शैक्षिक सामाग्री सहयोग गरेको साईराम डेन्टलकी प्रबन्ध निर्देशक डा.सुरु थापा न्यौपानेले जानकारी दिईन् ।
लकडाउन भएका कारण आफुहरुले गर्मीमा लगाउने कपडा भने लकडाउन खुलेसगैँ उपलब्ध गराउनुका साथै सहयोग निरन्तर गर्ने डा.दाम्पत्तीको प्रतिवद्धता समेत थियो ।
सहयोग सामाग्री डा. दम्पत्तीले एक कार्यक्रमका वीच वागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी किशोरकुमार दाहाल र प्रहरी नागरिक अभियान नेपाल (पिटुसिटु) का अध्यक्ष बेल बहादुर गुरुङलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै वागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी किशोरकुमार दाहालले सडक बालबालिकालाई पिटुसिटुले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर प्रसंशनिय काम गरेको बताए । सडक बालबालिकाका लागि सरकारले नै दिर्घकालिन योजना ल्याउनुपर्नेमा दाहालको जोड छ ।
प्रहरी नागरिक अभियान नेपाल (पिटुसिटु) का अध्यक्ष बेल बहादुर गुरुङले संस्था संचालनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै राज्यले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरेका थिए । उहाँले समाजमा अपराध नियन्त्रण गर्न र सडक बालबालिकाको भविष्य उज्वल पार्न पिटुसिटुले महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताए ।
सोही अवसरमा प्रहरी निरीक्षक देवराज काफ्लले नगद ११ सय ५ रुपैयाँ सहयोग दिदै अब आउने यसै शैक्षिकशत्र देखि संस्थामा आश्रित एक जनाको अभिभाकत्व ग्रहण गर्दै सहयोग निरन्तर गर्ने घोषण पनि गरेका थिए । उनले प्रहरी र नागरिकको यो अभियान नमुना भएको भन्दै सहयोगीमनले सहयोग गर्न अपिल पनि गरे । उनले आफ्नो जन्म महिनाको अवसर पारेर सहयोग गरेको बताए । कार्यक्रमामा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्वर ५ का वडाध्यक्ष पदमपाणि सुवेदी, कोषाध्यक्ष निर्देश सेढाई, प्रहरी निरीक्षक देवराज काफ्ले लगायतको सहभागीता थियो ।